ရာသီလာချိန်မှာ သန့်စင်လန်းဆန်းနေစေဖို့အချက် (၈)ချက် - Hello Sayarwon
ရာသီလာချိန်မှာ သန့်စင်လန်းဆန်းနေစေဖို့အချက် (၈)ချက်
ရာသီပန်းဆိုတာက အရွယ်ရောက်တဲ့အမျိုးသမီးတိုင်း လစဉ်ရှောင်လွှဲလို့မရဘဲ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပေါ့။ ရောဂါတစ်ခုမဟုတ်သလို ကြီးမားတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ရပ်မဟုတ်ပေမယ့်စိတ်ရှုပ်စေတဲ့ ကိစ္စဆိုတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ လစဉ်ပြဿနာကို ခံစားနေရတဲ့ နေ့တွေဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုက အလိုလိုကို ကျနေတာ၊ အနံ့ဆိုးတွေများထွက်နေမလား။ ပေတာတွေ၊စွန်းထင်းတာတွေများဖြစ်မလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်က တစ်ချိန်လုံးကိုကြီးစိုးနေရော။
အနံ့အသက်ဆိုးတွေကို ကြောက်တတ်တဲ့လေဒီတွေဆိုရင်တော့ အတော့်ကို စိတ်ပျက်စရာနေ့စွဲတွေပေါ့။ ကိုယ်တိုင်လည်း အနံ့အသက်ဆိုးကိုကြောက်တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေ ကိုယ့်ဆီကနေ အနံ့အသက်ဆိုးတွေထွက်နေလို့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှာကိုလည်း စိုးရိမ်နေတဲ့ ပျိုမေလေးတွေအတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ ပြောပြပေးမယ်နော်။
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရဲ့ ရာသီသွေးဆင်းမှုအပေါ်အမြင်အမျိုးမျိုးရှိကြပေမယ့် တူညီတဲ့ စိတ်ကူးတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ရာသီလာချိန်မှာ စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ပေါ့ပါးလန်းဆန်းနေချင်တဲ့ ဆန္ဒပါပဲ။ ဒီဆန္ဒလေးကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ဒီအချက်တွေကို လိုက်နာပေးပါ။
လစဉ်သုံးပစ္စည်းကို ပုံမှန်လဲလှယ်ပေးပါ – လစဉ်သုံးပစ္စည်းကို တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်လဲပေးပါ။ အရမ်းသွေးဆင်းမများရင်တောင်မှ မနက်ခင်းမှာ တစ်ခု ညနေခင်းမှာ တစ်ခုလောက်တော့လဲလှယ်ပေးပါ။ လစဉ်သုံးကို အကြာကြီးမလဲလှယ်ဘဲဝတ်ဆင်ထားတာက ပိုးမွှားတွေပေါက်ဖွားဖို့အားပေးသလိုဖြစ်နေနိုင်တာကြောင့်ပါ။ အနံ့အသက်ကင်းပြီးပေါ့ပါးလန်းဆန်းနေချင်တယ်ဆိုရင် ဒီအချက်ကို မေ့ထားလို့မဖြစ်ပါဘူး။
ပုံမှန်သန့်စင်ဆေးကြောပေးပါ – ရာသီသွေးဆင်းနေချိန်မှာ အရေပြားမှာပေကျံနေတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တာကြောင့် အနံ့အသက်ဆိုးဖြစ်ပေါ်မှုကို တားဆီးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သန့်စင်ဆေးကြောမှုလုပ်ပေးပါ။ Pad အသစ်မလဲခင်မှာ သေချာသန့်စင်ဆေးကြောပေးဖို့ိကိုလည်း မမေ့ပါနဲ့။
သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမယ့် ချည်သားအတွင်းခံဝတ်ဆင်ပေးပါ – ဒီလိုအချိန်မှာ သန့်စင်ပြီးနူးညံ့တဲ့ချည်သားအတွင်းခံကို ဝတ်ဆင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။ အရမ်းတင်းကျပ်တဲ့ အတွင်းခံတွေက နေရထိုင်ရ ကသိကအောက်ဖြစ်စေနိုင်သလို ပိုးမွှားတွေပေါက်ဖွားဖို့အားပေးသလိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဆပ်ပြာမသုံးပါနဲ့။ မိန်းမကိုယ်သန့်စင်ပေးတဲ့အရာတွေကို အသုံးပြုပါ– ဆပ်ပြာသုံးပြီး သန့်စင်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ ဘက်တီးရီးယားတွေပါက်ဖွားနိုင်ဖို့ အားပေးသလိုဖြစ်မှာစိုးတာကြောင့်ပါ။ ဒါကြောင့် မိန်းမကိုယ်အစ်ဆစ်ဓါတ် (pH balance) ကိုထိန်းညှိပေးပြီး အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားတွေ ပေါက်ဖွားမှုနှုန်းကို မြင့်တက်စေနိုင်တဲ့ Feminine wash မျိုးကို အသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်။
လစဉ်သုံးအသုံးပြုတဲ့အခါ တစ်မျိုးတည်းကိုပဲ အသုံးပြုပေးပါ – အချို့မိန်းကလေးတွေက သွေးဆင်းများတဲ့အခါ စွန်းထင်းတာမျိုးတွေဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်ပြီး Tampon ရော၊ Pad ရောအသုံးပြုတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ အချို့ဆိုရင် Pad ၂ ခုခံတာမျိုးရှိပါတယ်။ ။ တကယ်တော့ ဒါကပိုကောင်းသွားစေတဲ့အရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အရေပြားမှာ ပွန်းပဲ့တာတွေဖြစ်စေနိုင်သလို ဘက်တီးရီးယားတွေ ပေါက်ဖွားမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အခန့်မသင့်ရင် အနံ့အသက်ဆိုးကို ပိုဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် နှစ်မျိုး၊နှစ်ခုသုံးတာမျိုးမလုပ်ဖို့ပြောပါရစေ။
ရေပုံမှန်ချိုးပါ – ရာသီလာနေချိန်မှာ ပုံမှန်ချိန်ထက် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကို ပိုဂရုစိုက်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်။ ခန္ဓါကိုယ်ကအနံ့အသက်ဆိုးတွေအတွက်ရော ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ ရေကိုပုံမှန်ချိုးပေးပါ။ မချိုးဖြစ်ရင်တောင် အနည်းဆုံး တစ်နေ့ကိုတစ်ကြိမ်တော့ချိုးလိုက်ပါ။ ရေချိုးတာက လန်းဆန်းစေရုံတင်မဟုတ်ဘဲ ရာသီလာချိန်မှာဖြစ်တဲ့နာကျင်ကိုက်ခဲမှုကိုသက်သာစေနိုင်သလို စိတ်ခံစားမှုကိုပါကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။ ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ချိုးပေးတာက ပိုအဆင်ပြေစေမှာပါ။
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ – ရုံးသွားတဲ့အိတ်ထဲမှာ Pad အပိုတစ်ခုလောက်ဆောင်ထားပေးပေါ့။ အဆင်သင့်ဖြစ်တာကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တာမျိုးမရှိတော့ဘူးပေါ့။ ပြင်ဆင်မှုကအကောင်းဆုံး နည်းလမ်းပါ။
အဝတ်တွေကို သေချာလျှော်ပေးပါ – ပုံမှန်ချိန်ထက်ရာသီလာချိန်မှာ ဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်အစားတွေကို သေချာဂရုစိုက်လျှော်ပေးပါ။ ဆပ်ပြာမှုန့်နဲ့သေချာစိမ်ထားပြီးမှ အချိန်ယူပြီးလျှော်ပေးပါ။ အစွန်းအထင်းတွေကိုလည်းပြောင်စင်အောင်လျှော်ပေးဖို့ပါ။
အခုပြောပြခဲ့တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကို အသုံးပြုပြီး ရာသီလာချိန်ကို ပေါ့ပါးလန်းဆန်းအောင်နေထိုင်လိုက်ပါနော်…..
10 menstrual hygiene tips every girl and woman should knowhttp://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/hygiene-during-menstrual-periods-10-things-you-should-know/ Accessed Date7September 2018
Tampons, Pads or Menstrual Cups? What’s Right for You? http://www.healthywomen.org/content/article/tampons-pads-or-menstrual-cups-whats-right-you Accessed Date7September 2018
Toxic shock syndromehttps://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/toxic-shock-syndrome/symptoms-causes/syc-20355384 Accessed Date7September 2018
Stay Clean During Your Periodhttps://www.verywellhealth.com/stay-clean-during-your-period-2721979 Accessed Date7September 2018
Menstrual Hygiene Matters: How to Stay Clean and Fresh on Your Periodhttps://www.verywellhealth.com/stay-clean-during-your-period-2721979 Accessed Date7September 2018